बार बार काला भेडा5रील बार बार काला भेडा5रील
तपाईं त देहात खेत प्रेम जीवन भने बार बार काला भेडा5रील छ मोबाइल स्लट खेल तपाईं प्ले विचार गर्न. यो मोबाइल स्लट बेलायत शीर्ष अप खेल संग खेलिन्छ 15 paylines तय तर तपाईं प्रति आफ्नो आवश्यकता रूपमा सिक्का मूल्य र सिक्का स्तर समायोजन गर्न सक्नुहुन्छ छन्. पृष्ठभूमिमा मा हँसिलो देश संगीत आफ्नो खुट्टा यसको ट्युन गर्न ट्याप राख्छ. पृष्ठभूमिमा छवि तपाईं कसरी खेत जीवन लग को सिद्ध महसूस दिन्छ कि एक उच्च परिभाषा भेडा सबै भन्दा खेत र एक दूरी एक हावा बाट चल्ने घट्रट छ. तपाईं £ 0.15 देखि सुरु तपाईंको शर्त रकम चयन र प्रति स्पिन £ 150 को एक अधिकतम गर्न यसलाई हुर्काउन सक्छन्.
बार बार काला भेडा विकासकर्ता बारेमा5रील:
यो सुन्दर landscaped मोबाइल स्लट बेलायत शीर्ष अप खेल Microgaming विकास भएको थियो, के तपाईं महसुस कि व्यावहारिक विषयवस्तुहरू संग खेल बनाउनको लागि लोकप्रिय एक डेभलपर खेल को भाग हो. तिमी खेल्न र जाँदा पैसा जित्न सक्छौं त्यसैले तिनीहरू धेरै मोबाइल आधारमा स्लट सिर्जना गरेका.
यो मोबाइल स्लट बेलायत शीर्ष अप खेल कालो भेडा सात धेरै रोचक प्रतीक संग खेलिन्छ, सेतो भेडा, खेत घर, बार, स्याऊ, सुन्ताला, खरबुजा, brinjal र मकै सिल. ती पाँच 2nd पङ्क्ति मार्फत देखा जब शीर्ष प्रतीक तिर्ने संग कालो भेडा छन् 10000 पटक stakes, तिर्ने सेतो भेडा 8000, 6000 खेत घर र बार भुक्तानी संग पटक हो 5000 पटक आफ्नो खम्बा. यो दुई बोनस प्रतीक हो मोबाइल स्लट खेल; तिनीहरूले खेल लोगो र एक झोला ऊन भरिएका छन्.
जंगली र स्क्याटर विशेषताहरु: यो मा जंगली मोबाइल स्लट बेलायत शीर्ष अप को स्क्याटर बाहेक सबै को लागि खेलाडी र खेल लोगो प्रतिनिधित्व छ. बीचमा पङ्क्ति मा एक सीधा लाइन मा पाँच सक्छन् तपाईं पनि दिन 20000 पटक आफ्नो खम्बा. ऊन को झोला निःशुल्क spins छरिनु छ र यो तपाईं दिन्छ 10, 15 वा 20 यसको अवतरण मा निःशुल्क spins 3, 4, वा5एक स्पिन समयमा पटक. यो पाँच पनि दिन्छ 15000 निःशुल्क spins साथ पटक खम्बा.
कालो भेडा गुणक: सुविधा पल्ट पल्ट काला भेडा भनिन्छ र नाम सीधा लाइन मा एक कालो भेडा संग दुई पल्ट प्रतीक को उपस्थिति सुझाव रूपमा सुविधा क्रियाशीलता. एक पटक ट्रिगर, आफ्नो सबै WINS अप गर्न ले गुणन छन् 999 जो तपाईं फोहर धनी बनाउन सक्छ पटक.
सारांश: यो मोबाइल स्लट बेलायत शीर्ष अप तपाईं आफ्नो पैसा wager र यो पटक हजारौं गुणा र विशाल लाभ गर्न चाहनुहुन्छ भने सही छ. स्लट खेल खेल्दै आफ्नो जीवित बनाउन जो गम्भीर मान्छे को लागि एक खेल.